Yaa Daran Hergabka Iyo Karoona Fayrus | Xaqiiqonews
Yaa Daran Hergabka Iyo Karoona Fayrus
Sanad walba Qiyaastii 5 Milyan oo qof ayuu ku dhacaa Fayruska Hergabka, 650,000 oo qof ayaana u dhimata hergabka sida uu qoray websaaytka Axios.
Websaaytka Buzzfeednews ayaa daabacay warbixin dheer oo uu ciwaan uga dhigay “ha ka walwalin Karoona, ka walwal Hergabka”,ka dib markii dunida ay gashay heegan buuxa oo ka dhan cudurka Karoona Fayrus.
Qorayaasha Websaaytka Axios ayaa iyagana aaminsan sidan “hadii aadan qaadan talaalka hergabka, islmarkaana aad ka cabsaneyso cudurka Karoona, waxaa tahay qof dambeeysa”.
Cudurka Karoona Fayrus waxa uu dilaacay sanadka 2019, waxa uuna ku dhacay dad dhan 20,000, hase ahaatee arintaasi marna uma dhiganto cudur weynaha hergab oo galaaftay nolasha 10,000 oo qof gudaha Mareykanka oo kaliya sanadkan dhexdiisa.
Hergabka Waa uu Ka Halis badan Yahay sida aad moodo
“Hergabka waa cudur halis ah, waxa uuna sanad walba ku dhacaa dadyow badan” waxaa sidaadi aaminsan Dr. Helfand.
Sidoo Kale Aqr..Diblomaasigii Ugu Horeeyey Oo Qolka Caafimaadka Loo Geeyey Karoona Fayrus
Hergabka ayaa sabab u noqon kara cudurro badan sida pneumonia iyo wadna xanuun, taaasina waa sababta dhaqaatiirta u bixinayaan digniino.
Dr. Helfand ayaa sheegaya in digniinta ugu fiican ee la siiyo qof hergab ku dhacay ay tahay”Hadii uu kugu dhaca hergab arinka ugu fiican ee aad sameyso waaa in aad guriga joogtaa.”